တရုတ်နိုင်ငံက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ယွမ် ၅ ဒသမ ၃ ထရီလီယံကျော် အသုံးပြုခဲ့ - Xinhua News Agency
ခေတ်သစ် တရုတ်လူငယ်များသည် ကြီးလေးသောတာဝန်များကို ရဲဝံ့စွာထမ်းဆောင်နိုင်ကြကြောင်း စာက္ကူဖြူစာတမ်းတွင်ဖော်ပြထား
ပေကျင်း ၊ ဧပြီ ၂၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ယွမ် ၅ ဒသမ ၃ ထရီလီယံကျော်(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၁၇ ဘီလီယံဝန်းကျင်) အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကထက် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဧပြီ ၂၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သော စာရင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ စာရင်းများအရ ယွမ် ၄ ဒသမ ၃ ထရီလီယံဝန်းကျင် သို့မဟုတ် စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် အစိုးရဘတ်ဂျက် အသုံးစရိတ်မှ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း မူကြိုပညာရေး ၊ မသင်မနေရ ပညာရေး ၊ အထက်တန်းကျောင်း ပညာရေး နှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးတို့တွင် အသုံးစရိတ်များသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အသုံးစရိတ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂ ဒသမ ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ၆ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ၉ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ၃ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး တိုးမြှင့်သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, April 27 (Xinhua) — China spent more than 5.3 trillion yuan (around 817 billion U.S. dollars) on education in 2020, up approximately 5.65 percent from 2019, showed statistics released Tuesday by the Ministry of Education.
The statistics indicated that about 4.3 trillion yuan, or over 80 percent of the total spending, came from government budgetary spending.
Spendings on pre-school education, compulsory education, senior high school education and higher education had increased by 2.39 percent, 6.55 percent, 9.14 percent and 3.99 percent, respectively, in 2020, compared with the expenditures in 2019. ■
ကုန်းမြင့်ဒေသတွင် နေထိုင်သူများက ပညာရေးနှင့် မြို့ပြလူနေမှုဘဝကို တန်ဖိုးထားလာ
တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံက ပညာရေးဖလှယ်မှုလုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်